Philosophy | Lost Sheep for Christ | Page 3
L’immensité de la puissance de Dieu COMMENT UN ÊTRE INFINI PEUT-IL FAIRE QUELQUE CHOSE À PARTIR DE RIEN? Aaron Joseph Hackett | Philosophie |05 / 04 /20
Dieu parle, les choses arrivent La plupart d’entre nous connaissent l’histoire de la Genèse. Que Dieuatout créé en six jours et le septième jour, il s’est reposé. Vous êtes-vous déjà demandé qui est Dieu? De combien de pouvoir dispose-t-il et comment est-il possible de créer l’univers? Dieu est un être qui n’est unique qu’à lui-même. Aucune autre […]
A vastidão do poder de Deus COMO PODE UM SER INFINITO FAZER ALGO DO NADA? Aaron Joseph Hackett | Filosofia |05 / 04 /20
Deus fala, as coisas acontecem A maioria de nós conheceahistória do Gênesis. Que Deus criou tudo em seis diaseno sétimo dia, ele descansou. Você já se perguntou quem é Deus? Quanto poder ele temecomo é possível criar o universo? Deus é um ser que é único apenas para si mesmo. Nenhuma outra força […]
La inmensidad del poder de Dios. ¿CÓMO PUEDE UN SER INFINITO HACER ALGO DE LA NADA? Aaron Joseph Hackett | Filosofía |05 / 04 /20
Dios habla, las cosas suceden La mayoría de nosotros conocemos la historia de Génesis. Que Dios creó todo en seis días y en el séptimo día, descansó. ¿Alguna vez te has preguntado quién es Dios? ¿Cuánto poder tiene y cómo es posible crear el universo? Dios es un ser que es único solo para sí mismo. Ninguna otra fuerza […]
Xudoning qudratining cheksizligi QANDAY QILIB CHEKSIZ MAVJUDOT YO’QLIKDAN NIMADIR YARATISHI MUMKIN? Aaron Joseph Hackett | Falsafa |05 / 04 /20
Xudo gapiradi, narsalar bo’ladi Ko’pchiligimiz Ibtido kitobini bilamiz. Xudo hamma narsani olti kunda yaratdi va ettinchi kuni dam oldi. Siz o’zingizni Xudo kim deb o’ylab ko’rganmisiz? U qancha kuchga ega va qanday qilib koinotni yaratish mumkin? Xudo faqat o’ziga xos mavjudotdir. Unga koinotni yaratishda boshqa hech qanday kuch yordam bermadi. Shuning uchun Xudo ma’lum olamni yagona yaratuvchisidir. Keling, Ibtido kitobining birinchi […]
د خدای د قدرت پراخه څنګه کولی شي یو لامحدود وجود له هیڅ شي څخه یو څه رامینځته کړي؟ هارون جوزف هیکټټ | فلسفه |05 / 04 /20
دای خبرې کوي ، شیان پیښیږي زموږ څخه ډیری د پیدایش کیسه پوهیږي. دا چې خدای هرڅه په شپږ ورځو کې پیدا کړي او په اوومه ورځ یې آرام وکړ. ایا تاسو کله هم ځان ته حیران یاست ، خدای څوک دی؟ هغه څومره ځواک لري او دا څنګه امکان لري چې کائنات رامینځته کړي؟ خدای هغه ذات […]
परमेश्वरको शक्ति को विशालता कसरी असीमित प्राणीले केहि बनाउनबाट केही गर्न सक्दछ? हारून यूसुफ Hackett | दर्शन |05 / 04 /20
भगवान बोल्नुहुन्छ, चीजहरू हुन्छन् उत्पत्तिको कथा हामी धेरैलाई थाहा छ। त्यो छ दिनमा परमेश्वरले सब थोक सृष्टि गर्नुभयो र सातौं दिनमा उहाँ विश्राम लिनुभयो। के तपाईंले कहिल्यै आफूलाई सोच्नुभएको छ, परमेश्वर को हुनुहुन्छ? उहाँसँग कति शक्ति छ र यो ब्रह्माण्ड कसरी बनाउन सम्भव छ? परमेश्वर त्यस्तो प्राणी हुनुहुन्छ जुन केवल आफैंमा अद्वितीय छ। ब्रह्माण्डको निर्माणमा अरु बाह्य शक्तिहरूले उसलाई […]
ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ကြီးလှပေ၏ ဘယ်လိုအဆုံးမဲ့ဖြစ်လျက်ရှိနေတာဟာဘာမှမလုပ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အာရုန်သည်ယောသပ်သည် Hackett | ဒန |0င်5/ 04 /20
ဘုရားသခင်ပြောတာ၊ ကမ္ဘာ ဦး ကျမ်းအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အများစုသိကြသည်။ ဘုရားသခင်ကအရာရာတိုင်းကိုခြောက်ရက်ပတ်လုံးဖန်ဆင်းပြီးခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌သူအနားယူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမင်းစဉ်းစားဖူးသလား။ သူ၌စွမ်းအားမည်မျှရှိပြီးစကြဝuniverseာကိုမည်သို့ဖန်တီးနိုင်မည်နည်း။ ဘုရားသခင်သည်မိမိကိုယ်ကိုသာလျှင်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စကြဝofာကိုဖန်ဆင်းရာတွင်အခြားပြင်ပအင်အားစုများကသူ့ကိုမကူညီခဲ့ကြပါ။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်စကြဝuniverseာကိုတစ် ဦး တည်းသောဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ ဦး အခန်းကြီး ၁ ကိုဖြိုခွဲကြစို့။ ကမ္ဘာ ဦး ၁း၁-၅ “ အစအ ဦး ၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မြေကြီးသည်အဆင်းသဏ္andာန်မရှိ၊ လွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်ကလည်းလင်းဖြစ်စေဟုအမိန့်တော် ရှိ၍ အလင်းဖြစ်လေ၏။ ထိုအလင်းသည်လင်းလေ၏။ ထိုအလင်းကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်။ ၊ အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ကိုပိုင်ခြားခွဲထားတော်မူ၏။ အလင်းကိုနေ့ဟူသောအမည်ဖြင့်၎င်း၊ မှောင်မိုက်ကိုညဉ့်ဟူသောအမည်ဖြင့်၎င်း၊ ညဦးနှငျ့နံနကျတစျခုရှိခဲ့ နေ့ ‘ ။ ဖန်ဆင်းခံသတ္တ ၀ ါတစ် ဦး ၏တည်ရှိမှုသည်“ သဘာဝအလျောက်ထည့်သွင်းထားသည်” ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့ဉာဏ်အတွင်းနက်ရှိုင်းစွာကျွန်ုပ်တို့တစ်စုံတစ်ခုထွက်ပေါ်နေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိထားကြသည်။ ဘုရားသခင်သည်မည်မျှကြီးထွားမှုတိုင်းတာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ၊ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမျှဘုရားသခင့်မျက်နှာတော်ကိုမဖော်ပြခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းကင်ကိုတက်ပြီး Beatific Vision ၌ပျော်မွေ့သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်။ အခုတော့တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကို“ ငါဘုရားသခင်ကိုမမြင်ရရင်သူမရှိဘူး” လို့ပြောလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် DNA ကိုမျက်စိမမြင်ဘဲကြည့်နိုင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တီထွင်ဖန်တီးထားသောအရာဝတ္ထုအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဒီအဲန်အေအမျိုးအစားရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုမဖယ်ရှားနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုအဆုံးမရှိအဓိပ္ပာယ်ဖြင့်နားလည်လာသည်။ စိန့်သောမတ်စ်အကွီနာ့စ်ကသူသည် Summa Theologica တွင် “ တမန်တော်က“ သူမြင်ရသောအရာများကိုရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့ရပြီး၎င်းကိုပြုလုပ်ထားသောအရာများအားဖြင့်နားလည်ထားသည်” ဟုဆိုသည် (ရောမ ၁း၂၀) ။ သို့သော်ဖန်ဆင်းခြင်းများအားဖြင့်ဘုရားသခင်တည်ရှိခြင်းကိုပြသခြင်းမရှိပါက၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပထမဆုံးအချက်ကတော့ငါတို့တည်ရှိမတည်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ […]
ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਜੀਵ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਰੋਨ ਜੋਸਫ ਹੈਕੇਟ | ਫਿਲਾਸਫੀ |05 / 04 /20
ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ, ਉਸਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ […]
Ang kalakhang kapangyarihan ng Diyos PAANO MAKAGAWA NG ISANG WALANG HANGGAN NA PAGGAWA NG ISANG BAGAY MULA SA WALA? Aaron Joseph Hackett | Pilosopiya |05 / 04 /20
Ang Diyos ay nagsasalita, nangyari ang mga bagay Karamihan sa atin ay alam ang kuwento ng Genesis. Na nilikha ng Diyos ang lahat sa Anim na araw at sa ikapitong araw, nagpahinga siya. Naisip mo na ba ang iyong sarili, sino ang Diyos? Gaano karaming kapangyarihan ang mayroon siya at paano posible na lumikha ng uniberso? Ang Diyos […]
Ang kadaku sa gahum sa Dios SA UNSANG PAAGI ANG USA KA WALAY KATAPUSAN NGA PAGBUHAT MAKAHIMO SA USA KA BUTANG NGA WALA? Aaron Joseph Hackett | Pilosopiya |05 / 04 /20
Nagsulti ang Dios, nahinabo ang mga butang Kadaghanan kanato nahibalo sa istorya sa Genesis. Nga gibuhat sa Dios ang tanan sa Unom ka adlaw ug sa ikapito nga adlaw, nagpahulay siya. Nakapangutana ka ba sa imong kaugalingon, kinsa ang Diyos? Unsa kadaghan ang gahum nga naa kaniya ug giunsa ang mahimo aron mahimo ang uniberso? Ang Diyos usa […]